Haween weynaha Soomaaliyeed oo ku farxay Magacaabistii Golaha wasiirada – SBC
Haween weynaha Soomaaliyeed oo ku farxay Magacaabistii Golaha wasiirada
Posted by Webmaster on Noofember 5, 2012 Comments
Ka hor ku dhawaaqista golaha Wasiirada Xukuumada Cusub ee Raiisul wasaare Saacid shacabweyanah Soomaaliyeed waxa ay ka dhursugayeen xubnaha ku so bixi lahaa iyo tayadooda sida ay noqon laheyd.
Maalin nimadii shalay gelinkeedii dambe markii lagu dhawaaqay golahan cusub shacabweynaha Soomaaliyeed ayaa siyaasbo kala duwan u soo dhaweeyay xubnaha ku soo baxay iyagoo ku tilmaamay kuwo badankood ku cusub dhegaha shacabka islamarkaana leh aqoon balse ka dhursugayaan sidoo kale waxqabadka ay la soo baxayaan.
Dadweynaha Soomaaliyed gaar ahaan haweenka ayaa siweyn u soo dhaweeyay magacaabista Wasiirada Cusub ee Soomaaliya, iyagoona ku farxay Jagadii ugu horeysay oo gaarsiisan heer raiisul wasaare ku xigeen oo uu xalay u magacaabay Haweeneey Raiisul wasaaraha cusub Mr Saacid, waxaanay u soo jeediyeen mahad celin iyo Hambalyo.
Qeybo ka mid ah Magaalada Muqdisho caasimada dalka Maanta waxaa ka dhacay banaan baxyo ay badankiis ka qeyb qaateen Haween iyo Bulsha weynta kale kuwaasi oo siweyn u soo dhaweeyay Golaha wasiirada ee Cusub.
Golaha wasiirada ee Cusub waa gole ka kooban sida uu ku dhawaaqay Raiisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon 10 xubnood waxaana ku jira laba haween oo jagooyin wasiiro ah loo dhiibay .